5 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 5 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix sanadka 2021
5 Siyaabood Oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix sanadka 2021
Isha Sawirka: istockphoto.com
Haddii aad jeceshahay daawashada filimada hadda iyo ka dib ama waqtiga firaaqadaada, markaa waxaa laga yaabaa inaad seegtay fursad weyn. Xaqiiqdii waad seegtay inaad kasbato lacag aad u tiro badan sannadahan oo dhan inaad ku daawato filimada Netflix.
Waxaa aad u badan yihiin siyaabaha lacag lagu helo daawashada Netflix. Waxaan aaminsanahay inaad naxday laakiin i rumee; way shaqaysaa
Haa, waad i maqashay si sax ah, waxaa jira ilaa 5 dariiqo oo lacag lagu helo daawashada filimada Netflix oo aad qiyaastid maxaa? Siyaabaha lacag loogu sameeyo daawashada Netflix waa sharci. Waa xaalad aad ku wada guuleysan karto. Waxaad dhadhamisaa raaxada daawashada filimada ee Netflix welina lacag ayaa lagu bixiyaa.
Markaad akhrinayso, waxaad baran doontaa xeelado fudud oo fudud lacag ka dhigashada daawashada Netflix filimada onlaynka ah inkasta oo aysan shirkaddu shaqaalayn.
Sidoo kale, uma baahnid inaad ka welwesho inaad lumiso lacagtaadii adkayd, halkii; adiga lacagtaadu ha kuu shaqayso. Siyaabahaan lacag loogu helo daawashada filimada Netflix uma baahna inaad bixiso wax lacag ah, sidaa darteed, adiga ayay kuu tahay xaalad faa'ido leh.
Sidaa darteed, aan u soo qaadno saldhigga maqaalkan, 5 dariiqo oo lacag lagu helo daawashada Netflix khadka tooska ah.
5 Siyaabood oo Lacag Loogu Sameeyo Daawashada Netflix
Qeybta soo socota waxay muujineysaa siyaabaha lacag loo helo intaad ka daawaneyso filimada Netflix khadka tooska ah
#1. Lacag Bixiya Si Aad U Daawato Netflix Si Rasmi Ah
Mid ka mid ah hababka lacag lagu helo iyada oo loo marayo Netflix waa adoo noqda shaqaale rasmi ah oo ka socda goobta caanka ah ee qulqulka internetka. Boggu wuxuu shaqaaleysiiyaa dad badan si ay u daawadaan filimada khadka tooska ah ujeedooyin kala duwan sida noqoshada naqdiye filim ama awoodo kale oo u jihaysan kor u qaadida adeegyadooda.
Sababta kale ee Netflix u siiso dadka inay daawadaan filimada onlaynka ah waa inay noqdaan kuwa wax calaamadeeya. Haa, Netflix waxay dadka siisaa inay sumad u siiyaan filimada shirkadda. Haddii aad nasiib u yeelatay in Netflix lagu shaqaaleeyo si aad u noqoto tagger markaa waxaad kasbataa lacag intaad samaynayso waxa aad jeceshahay, daawashada filimada.
Calaamadeeyayaashan Netflix waxaa si rasmi ah loogu yaqaan "falanqeeyayaasha tifaftirka" ama "falanqeeyayaasha hal -abuurka ah."
Sharaxaada shaqada ee sumadeeyaha Netflix wuxuu u baahan yahay inay ku sii daayaan filimo badan oo Netflix khadka tooska ah oo ay ku calaamadiyaan filimada kala duwan iyo dhacdooyinka barnaamijyada TV -ga leh metadata ku habboon.
Calaamaddu aad bay faa'iido ugu leedahay shirkadda maadaama macneheedu yahay inay gacan ka geysaneyso badbaadinta macluumaadka khuseeya filim gaar ah sida sannadka filimka la soo saaray, kabka, agaasimayaasha iwm.
Noqo tagger Netflix waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee siyaabaha lacag loogu helo daawashada filimada Netflix khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma jiraan shaqooyin bannaan oo loogu talagalay booska astaanta Netflix.
Tani sabab uma aha inaan dareemo xumaan maadaama aan wali haysanno siyaabo xiiso leh oo lacag looga helo Netflix oo u furan dhammaan iyo dhammaanba.
#2. Ku Bixi Swagbucks Marka Aad Daawato Netflix
Hab kale oo lacag lagu kasbado internetka inta aad daawaneyso filimada Netflix waa iyada oo loo marayo Swagbucks. Waxaad ku heli kartaa lacag daawashada filimada Netflix markii aad xubin ka noqoto Swagbucks. Run ahaantii, kani ma aha qorshe kale oo hodan ah oo degdeg ah.
Si aad iskaga diiwaangeliso Swagbucks, uma baahnid inaad bixiso qadar lacag ah sababta oo ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa iska diiwaangelinta emaylka. Taa bedelkeeda, Swagbucks waxay siisaa gunno soo dhaweyn ah $ 5 kadib markay dhammaystirto diiwaangelintaada.
Swagbucks waa codsi siiya dadka sida aniga iyo adiga dhammaystirka hawlaha yaryar sida dib u eegista aflaanta gaagaaban. Waxaad lacag ka kasban kartaa Swagbucks adiga oo socodsiiya barnaamijka intaad ku jirto Netflix oo sii daaya filimada ama taxanaha aad rabto. Sidan ayaad lacag uga kasbataa Swagbucks intaad ka daawanayso filimada aad ugu jeceshahay Netflix.
Sidoo kale, waxaad ku arki doontaa fiidiyowyo xiiso leh Swagbucks oo lacag ku kasban lahaa adiga oo daawanaya waxaad jeceshahay. Si aad wax badan u barato oo aad iskaga qorto Swagbucks, booqo xiriirinta hoose.
#3. Dakhliga sanduuqa
Waxaa jira degello lacag kugu siiya inaad ka daawato fiidiyowyada khadka tooska ah iyo Inbox dollars ayaa ka mid ah. Qaar ka mid ah boggaga waxay ku siiyaan lacag si toos ah lacag caddaan ah halka kuwa kale ay isticmaalaan kaararka hadiyadda.
Shabakadaha qaarkood xitaa waxay xubnahooda ku bixiyaan PayPal taas oo ah hab dhaqso ah oo lacag lagu helo. Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u hesho barnaamijyada sida Inbox Dollars waa inaad soo dejiso arjiga oo aad saxiixdo faahfaahintaada.
Waxaad u baahan doontaa inaad daawato fiidiyowyo gaagaaban oo aad uga tagto fikradahaaga ku saabsan fiidiyowyada. Waa degel sahan oo ay daawadayaashu ku dhiibtaan ra'yigooda ku saabsan fiidiyowyada.
Tani maahan khiyaamo maadaama aad ka hubin karto dib-u-eegista Inbox dollars ee macruufka ama Google Play-store si aad u aragto isticmaaleyaasha oo dib u eegaya barnaamijka.
Si aad ula saxiixato barnaamijka oo aad bilowdo inaad lacag sameyso, booqo websaydhka.
MyPoints waa degel iyo app la mid ah sidii mar hore kor lagu sharraxay in kasta oo ay xoogaa ka duwan tahay qaabkeeda hawlgalka. Isticmaalayaasha waxaa looga baahan yahay inay dib u eegaan liistada liiska halka ay ka helaan dhibcaha. Habka ay ula shaqayso iyaga ayaa ah inaad kasbato dhibco si aad u daawato liisaska, halkii aad ka daawan lahayd fiidiyowyo shaqsiyeed.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad ugu kasbato MyPoints waa inaad ku bilowdo liistada liiska app -ka ka dib qodobbada qaar ayaa lagu siinayaa dhammaadka liiska liiska. Hababkani waxoogaa way ka duwan yihiin siyaabaha lacag looga sameeyo daawashada filimada Netflix ee khadka tooska ah laakiin waxay wadaagaan waxyaabo badan oo isku mid ah maxaa yeelay waxaad lacag ku kasbataa inta aad filimka daawanayso.
Si aad xubin uga noqoto MyPoints oo aad u bilowdo lacag kasbasho, booqo websaydhka.
#5. Daaqadan ha hesho Meesha aad Lacagta ku khasaarto
Waxaad lacag ka badbaadin kartaa rukhsaddaada internetka ee xad -dhaafka ah markii aad iska qorto bot caan ah oo Facebook ah oo la yiraahdo goo. Miyaad si xad dhaaf ah ugu kharash garaynaysaa Netflix? U oggolow bot-ka loo yaqaan 'Trim' inuu falanqeyn ku sameeyo koontadaada bangiga si uu kaaga caawiyo jarista qashinka.
Siyaabo Kale Oo Lacag Loogu Siinayo Daawashada Fiidiyowyada
Waxa kale oo jira siyaabo kale oo aad lacag uga samayn karto daawashada fiidyowyada.
Sameynta lacag daawashada fiidiyowyada Swagbucks waa mid fudud. Marka hore, koonto ka samee goobta. Waad xiriirin kartaa koontadaada Facebook si ay kuugu fududaato. Xitaa waxaad heli doontaa $ 10 gunno kaliya is -qoritaanka.
Markaad gasho, guji tabka “Daawasho” ee bidixda. Halkaas, waxaad ka arki doontaa liiska qaybaha oo ay ku jiraan:
Wararka & Siyaasadda
Guji qayb oo dooro liistada fiidyowyada oo buuxa. Markaad dhammayso daawashada fiidiyowga, Swagbucks waxay ku weydiin doontaa inaad qiimeyso. Markaad taas sameyso, waxaad riixi kartaa "Next" si aad ugu gudubto fiidiyaha xiga. Fiidiyow aan daawaday wuxuu ahaa 45 ilbidhiqsi oo ku saabsan aktarada Julia Louis-Dreyfus oo ku guulaysatay amar xakamayn oo ka dhan ah dabagaale, kaas oo igu kasbaday 2 Swagbucks.
Markaad gaarto marinka qaarkood, waxaad Swagbucks u soo iibsan kartaa kaararka hadiyadaha dukaamada sida Amazon, iTunes, iyo Depot Home. Waxaad sidoo kale ku tabaruci kartaa dakhligaaga sababaha samafalka.
Sida Swagbucks, InboxDollars waxay kuu oggolaaneysaa inaad lacag ku kasbato adoo qaadanaya sahanno, googooyn gooyay, iyo hawlo kale oo fudud. Waxay kaloo leeyihiin qayb “TV” ah oo aad ka daawan karto fiidyowyo si aad lacag uga hesho.
Qeybaha waxaa ka mid ah Cuntada, Wararka, Caannimada, Madadaalada, Farsamada, iyo Caafimaadka. Markaad gujiso fiidiyow, waxaa laga yaabaa inaad daawato xayeysiis ama laba ka hor inta qaybta weyn aysan bilaaban.
Fiidiyow kastaa wuxuu leeyahay qaddar bixintiisa, oo aad u yar, badiyaa qiyaastii 2 senti fiidiyow kasta. Mararka qaarkood waa inaad la falgashaa fiidiyowga ama aad dhammaystirtaa hawl kale. Taasi waa sababta aadan lacag badan uga heli doonin daawashada fiidiyowyada InboxDollars. Ka dib markaad daawato qaddar fiidyowyo ah, waad ciyaari kartaa xoqid oo waad ku guuleysan kartaa ciyaarta si aad u hesho lacag dheeri ah.
InboxDollars waxay leedahay ugu yaraan $ 30 looga baahan yahay bixinta. Tani waxay qaadan kartaa waqti in lagu kasbado, markaa isku day inaadan ku tiirsanayn InboxDollars bixinta joogtada ah.
Si ka duwan adeegyada kale ee liistadan kuu oggolaanaya inaad ka daawato fiidyowyada kombiyuutarkaaga ama laptop-kaaga, Viggle waxaa kaliya loogu heli karaa barnaamij ahaan labada isticmaale ee iPhone iyo Android.
Ka dib markaad soo dejiso Viggle, waa inaad sameysaa koontadaada oo aad siisaa gelitaanka goobta. Kani wuxuu go'aamiyaa barnaamijyada aad u -qalantid inaad daawato. Tusaale ahaan, haddii aad ku nooshahay Detroit, waxaad ku arki doontaa kuwa ku xiran TV -ga maxalliga ah iyo sidoo kale kanaalada qaranka. Waxaad kaloo ku raadin kartaa barnaamijyada magac ahaan.
Si ka duwan websaydhada iyo barnaamijyada kale, waxaad ku daawan kartaa bandhigyada dhabta ah Viggle oo aad ku kasban kartaa dhibco adoo daawanaya xayeysiisyada iyo xayeysiisyada. Kuwaas waxaa ka mid ah bandhigyada kanaallada fiilooyinka sida HBO, Disney Channel, iyo AMC.
Waad ku furan kartaa dhibcaha kaararka hadiyadaha tafaariiqda ama kaarka hadiyadda ah ee lacag-bixinta ah. Si sax ah uma cadda sida aad dhibco uga kasban karto Viggle markaa saacado ha ku lumin barnaamijkan haddii aadan arkin mushahar weyn.
Aragtida kor ku xusan waxay muujinayaan qaababka ugu wanaagsan ee lacag lagu kasbado inta aad daawashada filimada ku bixinayso internetka. Goobaha qaarkood si toos ah ulama shaqeeyaan Netflix laakiin waxay ku lug leedahay daawashada filimada oo aan filayo inay tahay waxaad jeceshahay inaad sameyso.
Talo soo jeedin
45 Dariiqyada Ugu Dhaqsaha Badan Si Loogu Sameeyo Lacag Kaash ah oo Khadka tooska ah
35 Siyaabood oo Hubaal ah oo Maalin kasta lagu Sameeyo 200 oo Doollar - Wareegga Hantida
Dib -u -eegista Ibotta 2021: Ibotta Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Maxay Tahay Miisaaniyaddayda Dheeman Habka ugu Fiican ee Loo Iibiyo Giraan Dheeman 2021
Dib-u-eegida Amaahda PayPal 2021: Qiimeeynta, Astaamaha, Sharci ama Khiyaano
Meelaha lagu Iibiyo Dahabka Dahabka ah ee Khadka Tooska ah ee Dalabka ugu sarreeya sanadka 2021
Fiiri Faallooyinka (20)
7 Siyaabood oo Fudud oo Laptop Bilaash ah lagu Helo
Imisa Xisaab Bangi Ayaa Leh Inaan Leeyahay | Tilmaan Buuxo
7 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siinayo Si Aad U Dhageysato Wicitaanada 2021
Weligaa ma ku fikirtay xaqiiqda ah inaad dhab ahaantii lacag ka dhigi karto dhegeysiga wicitaannada? Tan dhexdeeda…
Dib -u -eegista Steemit 2022: Ma Xalaalbaa Mise Waa Khiyaamo | Siduu U Shaqeeyo
Haddii aad tahay qoraa doonaya khibrad qoraal oo daacad ah, furfuran, oo aan laga fiirsan, Steemit waa mid wanaagsan…
Daqiiqad 13 akhri
PFikradaha Dakhliga Dadban
10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Laga Helo Maansada Lacag 2022
Caqabadda ugu weyn ee abwaannada badankoodu wajahaan ayaa ah sida lacag looga helo waxa ay jecel yihiin samaynta - maansada.…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Baraha Bulshada Si Degdeg Ah 2022
Waan kuu sheegi karaa, waxaa jira siyaabo badan oo aad lacag uga heli karto baraha bulshada. Laakiin…
Daqiiqad 5 akhri
Sida Lacag Loogu Sameeyo eBay Iyadoon Waxba La Iibin | 2022 La cusbooneysiiyay
Hadda ka hor, waxaan maqlay dadka oo ka hadlaya lacag ka samaynta internetka iyada oo aan waxba iibin. Markii hore, waxay u ekayd khiyaano…
Maalgasho $ 100 Samee $ 1000 Maalintii | 21 Maalgashi oo Hubaal ah 2022 -ka
$ 100 biil ayaa laga yaabaa inuu u ekaado raasamaal maalgashi laakiin haddii aad taqaano siyaabaha saxda ah iyo waxyaabaha…
Immisa Ayaa La Siiyaa Astronauts 2022?